Ukuba uthenga iPod yasekhaya, iApple ikuthumela enye eyenziwe kwiminyaka emithathu edlulileyo | Ndisuka mac
Ukuba uthenga iPod yasekhaya, iApple ikuthumela enye eyenziwe kwiminyaka emithathu edlulileyo
Andiphambani, ndiyazi ukuba iKhaya laseKhaya liphelisiwe yiApple. Ngapha koko sikuxelele ngale nto kule post. Inkampani igqibe ngemodeli encinci, ishiya eyokuqala iyathengiswa de isitokhwe siphele. Ukuba undwendwela iphepha leSpanish kwaye ufuna ukuthenga isithethi, ulinde inyanga enye engwevu nomhla omnye umhlophe. Nangona kunjalo, lumka kuba kukho abo bathenga le modeli ngoku kwaye ifumana izinto ezenziwe ekupheleni kuka-2017.
Nangona iApple iyekile iPodPod, oku kusaxabisa ama-euro angama-329. Andiqondi ncam ubuchule buka-Apple. Ukuba ufuna ukukhupha isitokhwe endleleni, into eqhelekileyo kukuthoba ixabiso kwaye ulungelelanise nemfuno, encinci incinci. Kungenxa yokuba isithethi sakuqala se-Apple asiyiyo eyona mveliso iyimpumelelo esiyithethayo. Kwaye esinye sezizathu ngokungathandabuzekiyo lixabiso. Nangona kunjalo kukho abo bafumana ezi modeli ngoku. Isenokuphuma kwi-nostalgia okanye isazi ukuba kwixa elizayo baya kuba nexabiso ngakumbi njengoko kwenzeka kwi-Mac Pro kwiminyaka engama-40 eyadlulayo.
Ngayiphi na imeko, into enokwenzeka ayifani kwinkampani enzulu njengeApple. Ngokuka-Yotuber uMichael Kukielka, eyaziwa ngokuba yiDetroitBORG, wathenga ubuncinci ii-HomePods ezimbini emva kokuba u-Apple eyiphelisile imveliso, kwaye wothuka kwiimodeli azithengileyo Yayingabo bebeqala ngokusungulwa. Oko kukuthi, kwiminyaka emithathu edlulileyo, ukuphela kuka-2017. Le yindlela ayifundise ngayo ngeakhawunti yakhe kwinethiwekhi yoluntu iTwitter. Sikwabona ukuba iplagi inamabala amhlophe, aqhelekileyo xa ichitha ixesha elininzi ngaphakathi ebhokisini.
Ayigcini ngokugcina ixabiso lasekuqaleni lePod yasekhaya kodwa ikwathumela nemodeli ukusuka kwiminyaka emithathu edlulileyo. Zange ndabona. Akunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuba uthenga iPod yasekhaya, iApple ikuthumela enye eyenziwe kwiminyaka emithathu edlulileyo
Ngoku ungadlala iFlappy Bird kwiwindow yesaziso seMacOS